Fahafatesan’i Geoge Floyd – Etazonia: efa ho herinandro izao, tsy miato ny rotaka, doro trano, fandrobana… | NewsMada
Fahafatesan’i Geoge Floyd – Etazonia: efa ho herinandro izao, tsy miato ny rotaka, doro trano, fandrobana…
Mitodika any Etazonia ny mason’izao tontolo izao. Herinandro katroka omaly, tsy miato ny rotaka mahery vaika, fihetsiketsehana an-dalambe, fandorana trano, fandrobana.. eny hatramin’ny banky aza, taorian’ny namonoan’ny polisy tamin’ny fomba feno herisetra ilay teratany amerikanina mainty hoditra, i George Floyd, 46 taona, ny alatsinainy 25 mey teo, tao Minneapolis, Etazonia. Tsy noraharahain’ny mpanao fihetsiketsehana ny fampiharana ny “couvre-feu” navoakan’ny fanjakana. Vao mainka aza nampirongatra sy nahatezitra ny mpanao fihetsiketsehana maro izany. Tsy ny mainty hoditra ihany fa hatramin’ny Amerikanina fotsy hoditra koa aza izao nirotsaka an-tsehatra, naneho ny tsy fahafaliany sy ny alahelony.
Anisan’ny naneho ny heviny noho izao toe-javatra izao ilay kintan’ny basikety amerikanina malaza, i Michael Jordan. “Fanavakavaham-bolon-koditra lalimpaka izao”, hoy izy, naneho ny alahelony sy ny hatezerany, tamin’ny alalan’ny fanambarana nataony, ny alahady teo.
Omaly, tafakatra nanoloana “Maison blanche”, lapam-panjakana amerikanina tao Washington ireo mpanao fihetsiketsehana analiny. Nahatratra 300 no voasambotra tao New York, omaly.
Fantatra fa nanao fihetsiketsehana koa ireo fikambanana samihafa maneran-tany, manohitra ny fanavakavaham-bolon-koditra. Nahitana izany, ohatra, tany Toronto, Kanada, tany Londres, renivohitr’i Angletera, ary tany Berlin, renivohitr’i Alemaina. Zava-doza tokoa hay rehefa leom-boananana sy mitroatra manoloana ny tsy rariny ny vahoaka.